Fampidinana an-tsokosoko avo lenta ny fampiasana fitaovana fitsaboana
Carbide Tipping dia manokana induction brazing dingana izay ametrahana fitaovana tendrony mihamafy amin'ny fitaovana fototra mba hamokarana sisiny faran'izay mafy.
Ny tanjon'ity fampiharana ity: fanodinana karbida fampidirana karatra fitaovam-pitsaboana Tian'izy ireo hampiasa teknolojia fanafana fampidirana hanoloana ny fanilo sy hahatratrarana dingana fanadiovana madio kokoa.
Fitaovana fanaovana pirinty induction:
DW-HF-15 Fitaovana fanosihosena entana napetraka tamin'ny 40% hamita ny fizotrany. Ny fifehezana dingana nomerika adaptive dia manome fiasa mahomby amin'ny fari-pahaizana matetika.
Ny fanapahana vy tsy misy vy 6 13/16 "(17 cm) lava miaraka amin'ny velarana 0.775" (1.96 cm) ho an'ny fanamainana dia tsy maintsy nopetahana tamin'ny sisiny karbida roa 25/32 "(1.98 cm) lava, 1/8" (7.8 mm) ny sakany, 3/32 "(2.54 cm) lalina. Nisy 9/16 "(1.42 cm) mifanindry lava, 1/8" (25.4 mm) ny sakany (amin'ny lafiny roa amin'ny loha fanapahana) ary 1/16 "(1.58 mm) ny halaliny.
Ny fliping Brazing dia napetraka amin'ny faritra iaraha-miasa. Ny sisin-karbida dia napetraka teo anelanelan'ny endrika mialoha. Nakatona ny fivoriambe ary nampidirina tao amin'ny Indonezianina fanalefahana. Ny hafanana dia nampiharina nandritra ny 8 segondra nahatratra ny hafanan'ny ~ 1400 ° F (760 ° C). Niara-nahomby ireo faritra ireo.
Industry: Fitsaboana sy fitsaboana nify
Sokajy Technologies Tags brazing, carbide brazing, Fikororohana ny karbide, fampidirana karbida brazing, fanafanana induction karbidaina brazing, Carbide Tipping, HF karbônina mandroba, HF mitongilana karbaona karbida, induction brazing, induction carbide carbide, Fametahana karbida, fampidirana fitaovam-pitsaboana miteraka brazing, fampidirana brazing fampidirana Post Fikarohana